Cube iwork1x uphononongo: ithebhulethi ye-PC ngee- $ 180 kuphela | Iindaba zeGajethi
Uhlalutyo lweCube iwork1x: I-PC yekhompyuter ye-180 € kuphela
UMiguel Gaton | | Reviews, amacwecwe
Ukuqhubeka nokuphononongwa kwethu kweemveliso zobuchwephesha, ngeli xesha sikuzisa Cube iwork1x uphononongo, 2-in-1 ithebhulethi PC enexabiso elixineneyo le- € 183 isinika ukusebenza okungaphaya kokuthakazelisa nge-4 GB ye-RAM, 11,6-intshi screen enesisombululo se-FullHD ngo-1920 × 1080 kunye nokuzimela ngeeyure ezi-5 ukusetyenziswa kwesixhobo. Ngaba uyafuna ukwazi ezinye iinkcukacha? Ewe, qhubeka ufunda inqaku lethu.
1 Ukusebenza kakuhle ngexabiso elifikelelekayo
2 Cube iwork1x uyilo kunye nomboniso
3 Unxibelelwano kunye nezinye iinkcukacha
4 Isiphelo kunye nekhonkco lokuthenga
Ukusebenza kakuhle ngexabiso elifikelelekayo
Iimpawu zobuchwephe beCube iwork1x ziyafana nezinye iipilisi zexabiso eliphantsi ezisandula ukufika emarikeni. Ibe I-4 GB ye-RAM kunye ne-64 GB yeROM, into ephantse ibe ngumgangatho kolu hlobo lweemveliso kwaye oko kuyimfuneko kakhulu ukuze ukwazi ukuqhuba Windows 10 ngokutyibilika ngokuchanekileyo. Kwinqanaba leprosesa, sifumene into enamandla ngakumbi kunesiqhelo, ukusukela kwisixhobo seCube beka iprosesa ye-Intel Atom X5-Z8350 I-Quad Core esebenza kwi-1.44GHz xa into eqhelekileyo ihlala iyiprosesa yeZ8300 emdala noko. Ayisiyo ukuba ngumahluko omkhulu kakhulu, kodwa yinto ebonakalayo ngokukodwa xa siqhuba iinkqubo okanye imidlalo yevidiyo efuna kakhulu.
Ibhetri yi-8500 mAh, ngaphezulu kokwaneleyo vumela iiyure ezi-5 zokusebenzisa kakhulu kwangaxeshanye ayisohlwayi kakhulu ubunzima besixhobo.
Cube iwork1x uyilo kunye nomboniso
La Isikrini sethebhulethi sikumgangatho olungileyo kwaye umfanekiso ujongeka umhle nkqu kwii-engile ezahlukeneyo nakwiimeko zokubukusa. Ngombulelo kubungakanani bayo be-11,6 intshi kunye nokusombulula kwayo kunokwenzeka ukuba usebenze kakuhle ngeWindows; Kuba, njengoko sisazi, inkqubo yokusebenza yeMicrosoft ithanda ukuvelisa inani eliphezulu leefestile kwiscreen kwaye ukuze isebenze ngokulula kuyimfuneko ukuba nescreen sobungakanani obaneleyo kunye nokuphepha ukuziva ungonwabanga.
Uyilo luhle, luyilo oluhle lwentsimbi. Icala elisezantsi kuphela esinokufikelela kweli candelo lelo isiciko sangasemva yiplastikiNangona kuyinyani ukuba ifihlwe kakuhle kwaye xa uyijonga kuqala kubonakala ngathi iyintsimbi. Kwicala lasekhohlo kukuphuma kwefowuni, izibuko elincinci le-HDMI, izibuko elincinci le-USB lokutshaja, izibuko le-USB 3.0 kunye neslot slot ye-MicroSD. Ngokwenxalenye yayo, kwicala lasekunene sinesithethi kuphela, esinomgangatho oqondayo ukuba ufuna ukumamela imovie kuya kufuneka usebenzise izithethi zangaphandle zeBluetooth okanye ezifanayo.
Kuza kubonelelwa nge- Ikhamera yangaphambili ye-2 MP, ethi nangona inika iziphumo eziqhelekileyo ingaphezulu ukwanela kolu hlobo lwesixhobo apho ikhamera kunqabile ukuba isetyenziswe yonke imihla.
Unxibelelwano kunye nezinye iinkcukacha
Kwinqanaba lokudityaniswa, iwork1x iza nayo yonke into esinokuyilindela kolu luhlu lwamacwecwe: WIFI: 802.11b / g / n y I-Bluetooth 4.0.
Ubukhulu ziisentimitha ezingama-29.96 x 18.06 x 1.02 kunye no-a ubunzima bebonke be-759 gram, inzima kancinci kunokuba besingathanda ... kodwa apha ubungakanani besikrini kunye nomthamo webhetri banetyala kwezi gram zongezelelweyo.
El Inkqubo yokusebenza yeWindows 10, into esiba ngumgangatho kwakhona kolu luhlu lwezixhobo. Iza ngaphambili efakwe ngesiNgesi nangesiTshayina kodwa sinokuzikhuphelela kwaye sihlaziye iSpanish ngokuthe ngqo kwaye ngaphandle kwengxaki.
Ukusetyenziswa kwakho kwemihla ngemihla kunjalo Ndicebisa kakhulu ukuthenga imouse yangaphandle kunye nekhibhodi ukufumana okungcono kuyo, kuba ukusebenzisa iWindowswos 10 enescreen sokuchukumisa kunokuba yinto engathandekiyo kwaye ngaphezulu kwako konke kungabi namveliso. Kule meko, kungcono ukuthenga ikhibhodi esemthethweni yethebhulethi, kuba idityaniswe ngokugqibeleleyo kwidokethi yemagnethi ekulula kakhulu ukuyisebenzisa. Ixabiso layo yi- $ 58 kwaye ungayithenga ngokucofa apha.
Isiphelo kunye nekhonkco lokuthenga
ICube iwork1x yithebhulethi yePC ebonisiweyo kwabo bafuna abasebenzisi isixhobo esinexabiso eliphantsi iinzipho Iimpawu ezinomdla. Ubunzima kunye nemilinganiselo yethebhulethi inkulu ngoko ke yenzelwe ukuba iphathwe ngezandla zombini kwaye, ukuba kunokwenzeka, etafileni. Ixabiso layo yi- $ 183 kwaye ungayithenga apha ngexabiso elifanelekileyo.
4 GB ye RAM
Apha ungabona zonke iinkcukacha zeli 2 kwi-1 ithebhulethi yePC.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » Umnxeba » amacwecwe » Uhlalutyo lweCube iwork1x: I-PC yekhompyuter ye-180 € kuphela
Izibane zendlela zibekwe emhlabeni kwidolophu yaseBodegraven, eNetherlands
UZelda: Umphefumlo weWild awukafiki kwaye sele unee-20 ze-DLCs ze-euro